NYI LYNN SECK 18+ DEN: March 2006
Posted by NLS at 3/31/2006 01:51:00 AM0comments Links to this post
အရမ်းချစ်တယ်။ တိုးတိတ်စွာလည်း ညည်းတွားခဲ့ ဖူးတယ်။ အပွင့်လင်းဆုံးလည်း ဟစ်အှောခဲ့ ဖူးတယ်။ သူမဟာ အလင်း နတ်သမီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်တွေ ညွှတ်ပြောင်းတဲ့ ညက စကြဝဠာမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ ယာဇ်ပူဇှောရင်း သူမကို လွမ်းဆွတ်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ငါဟာ အတဿတများစွာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပြတိုက်တစ်ခုပါ။ ငါဖြစ်နေရတာက ကှောဇောတစ်ချပ်။ ညနက်နက်ထဲက ဇရပ်ပျက် တစ်ဆောင်။ မီးတို့ လင်းလက်ခဲ့ ဖူးလေသည်။ အိပ်မရတဲ့ ညတွေမှာ ငါဟာ ပန်းတစ်ပွင့်ကို ဆေးရည်စိမ် ထားခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်ခဲ့ တာကတော့ မီးလျှံတစ်ခုပါ။ လမ်းတွေမှာ တံလျှပ်တွေ ထင်လာကြ လကွယ်ညက ငါ့ကို ပြုစားသွား ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့ရက်တွေ ကြာလာတော့ ရွှေရောင် အမှုန်အမှိုင်းတွေကို ဆွဲချွတ်ရင်း ချစ်သူပေးခဲ့တဲ့ လက်စွပ်လေး တစ်ကွင်း ပျောက်ခဲ့ရတယ်။ ချစ်သူ သတိတရ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ နေ့စွဲတစ်ရက်ဟာ ငါသူ့ရှေမှာ ခြေစုံချ တမ်းတရင်း ချစ်ခွင့် ရချင်ခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့သာ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ရော ကျွန်တှော့ကိုယ်စား ဘယ်လို ကြည်နူးပေးကြမလဲ။ ကောင်းကင်ကို လေပြေတိုးလို့ မိုးတွေ ရွာချတိုင်း တိမ်ညိုတွေ ရိုင်းစိုင်းနေ လိုက်ကြတာ ငါမနာလိုခဲ့ ပါဘူးလေ။ ငါဟာ အရူးတစ်ယောက်ပါ။ ငါဟာ ရေသေမှာ ကူးခတ်မိနေခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်တွေ့လိုက်တဲ့ နေ့ကတော့ ကောင်းကင်မှာ ပန်းပျိုးရမယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတာကိုး။ အမှားမှား အယွင်းယွင်းနဲ့ အသောက်ခံခဲ့ရတဲ့ စီးကရက် တစ်လိပ်လို ဘဝမျိုး ငါ့မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီ မျှောစင်ထိပ်ကို တက်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ပန်းတစ်ခင်း ပွင့်နေတာ မင်းတွေ့မှာပါ။ ချွေယူ နမ်းရှိုက် မင်းကြိုက်သလို (ဖျက်ဆီးချင်ဖျက်ဆီး) ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို စိတ်ကူးမျိုး အစထဲက ရှိနေခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းကင်ကို ရေပုံးကြိုးဆွဲပြီး တက်မလာခဲ့ပါနဲ့။ ဒီပန်းတွေက မင်းရေဖြန်းမှ ပွင့်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငါပြောပါရစေ။ ဒါဟာ ပွဲတှောတစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ မျက်လှည့်ပြကွက် တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ မျဉ်းပြိုင် နှစ်ကြောင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ငါမျှောမှန်း ဖူးပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း မရေရာတဲ့ မနက်ဖြန်တွေ ရှိနေတယ်။
ငါ ဆေးလိပ်တို တစ်ချောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ လိုအင်ဆနဿဒ၊ ရောဂါ၊ ဘောလ်ပင်တစ်ချောင်း၊ နားလည်တတ်မှုနဲ့၊ ရနံ့များ။ ငါ မျက်ရည် တွေနဲ့လည်း ကြေကွဲရဲ ခဲ့ပြီ။ နင့်ကိုချစ်တဲ့ ငါလိုကောင်ရဲ့ သွေးကိုဖောက် ကနဿတာရမှာ ခမ်းခြောက် သွားအောင်ကို ဖျန်းပက်လိုက်စမ်းပါ။ ငါဆိုတဲ့ ကောင်ကတော့ ရင်ခုန်သံငွေ့ငွေ့နဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထူမတ်ပြီး ပြန်လည်ပတ် ပစ်လိုက်မယ်။ မိုးရွာထဲမှာ ခင်ဗျား ဘယ်လောက် လမ်းလျှောက်ဖူးသလဲ။ သူမကငြင်းတယ်။ ခေါင်းတော့မခါ။ ပန်းကလေး လှနေတာကို (အခုမှ) သတိတရ ကြည့်လိုက်မိခါမှ ရနံ့မရလိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို မသနားကြပါနဲ့။ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လမ်းကို သွားရမြဲပါပဲ။
သံသယတွေ မင်းရင်ခွင်မှာ အသွင်ပြောင်း သွားတဲ့နေ့ ကျရင်သာ နင်ငါ့ကို သတိရပါတော့။ နှလုံးသားထဲ နစ်နေတဲ့အထိ ငါမင်းကို ချစ်ခဲ့တယ်။ တိုးတိတ်စွာ ငါတစ်ယောက်ထဲ ကြေကွဲခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေကို နင်စာနာပါတော့။ လွမ်းတယ်။ ဝင်သက် ထွက်သက်တွေနဲ့သာ ဆိတ်ငြိမ် အေးစက်ခဲ့ရသော ငါ့ရဲ့ဘဝတွေ။ အရိပ်တွေနဲ့၊ လှုပ်ရှားသက်ဝင် ခဲ့ရတာတွေ။ ခံစားချက်။ အဖြူရောင် ကျောက်တုံး တစ်တုံးပှေါမှာ ရေးထားတဲ့ ဘာနဲ့မှ မဖှောပြနိုင်တဲ့ ကောင်းကင်တွေ နင်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။
မိုးရွာထဲမှာ လင်းလက်လာမယ့် မီးအိမ်လေးကိုလည်း ငေးမောခဲ့ဖူးတယ်.......
Posted by NLS at 3/31/2006 12:44:00 AM0comments Links to this post
Labels: Essay, Poem
Posted by NLS at 3/31/2006 12:24:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/30/2006 11:38:00 PM0comments Links to this post
ကိုမောင်လှ တစ်ယောက် သူ့ပုံလေးတွေကို အနုပညာဆန်ဆန် လုပ်ထားတာ တွေ့လို့ လိုက်လုပ်ကြည့်တာ ချောမလာဘဲ အသက် ၅၀ ကျှော လူပေါကြီးပုံ ဖြစ်သွားတယ်။ မျက်နှာလေးက အားငယ်နေတဲ့ ပုံလေးနဲ့ သနားစရာလေးပါ။ ဟားဟား။ ရာဇဝတ် သမားနဲ့တော့ မတူဘူး။ ယစ်ထုပ်ကြီးနဲ့ တူနေတယ်။ ဒီပုံကို နောက် အနှစ် ၃၀ လောက်အတွက် ကြိုတင် ပရီဒစ် လုပ်ထားတဲ့ ပုံလို့သာ မှတ်ပါခင်ဗျ။
မှတ်ချက်။ ဤကဲ့သို့ ရုပ်ဖျက်ချင်သူများ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ ပိုမိုချောလာအောင် ကျွန်တှော မလုပ်တတ်။ ချောချင်သူများ နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်မည်ဟုမှတ်ပါ။
Tags : Design , NLS , Photo
Posted by NLS at 3/30/2006 10:22:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/30/2006 04:03:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/30/2006 03:15:00 AM0comments Links to this post
မင်းမသိသေးတဲ့ အဖေ့ရဲ့ နာမည်က မောင်ညီတဲ့။ မင်းနဲ့ သိပ်မစိမ်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဦးမောင်ညီ လှူဒါန်းသည် ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို မင်းကျောင်းမှာ မကြာခဏ အမှတ်မထင် ဆိုသလို တွေ့ဖူးနေမှာပါ။ အဲဒါဟာ အဖေပဲပေါ့။ မင်းအမေနဲ့ အဖေ လမ်းခွဲကြ ပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဘယ်တော့မှ တို့တတွေ မျက်နှာချင်း မဆိုင်ဖြစ်ကြတော့ဘူး။ အဖေ့ကို မြင်ရင် သူနာကျင်မှာစိုးလို့ သူရှိနိုင်မယ့် နေရာတွေ မှန်သမျှကို အဖေရှောင်ခဲ့တယ်။ သူကလည်း အဖေ ရှိနိုင်မယ့် နေရာတွေကို ရှောင်ခဲ့တယ်။ သူက ဘယ်လောက်တောင် အဖေ့ကို စိတ်နာလည်း ဆိုရင် အဖေ့လက်ရေး လှလို့ ရေးပေးပါဆိုပြီး သူ့စာအုပ်လေးတွေမှာ ရေးပေးထားခဲ့ဖူးတဲ့ အဖေ့လက်ရေးရှိတဲ့ စာရွက်တွေကိုတောင် သူက ဆုတ်ဖြဲပစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ချစ်ခင်နှစ်သက် ကြချိန်မှာ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားခဲ့ ကြတဲ့ အရာတွေကို လမ်းခွဲ ကြချိန်မှာ ဖျောက်ဖျက် ပစ်ကြတယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူးကွာ။ အဖေ့ဆီမှာတော့ သူနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေ အားလုံး ရှိနေပါသေးတယ်။ အဖေက အမှတ်တရ ပစဿစည်းလေး တွေဆိုရင် တခုတ်တရ သိမ်းထားတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပစဿစည်း လေးတွေကအစ အဖေ့သိမ်းထားခဲ့တာပါ။
မင်းက မင်းအမေ အဖေ့ကို အမှတ်တရ ပေးထားခဲ့တာလေးတွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ဆုံးက လိပ်စာမှာ မင်းရှာကြည့်ပေါ့။ အဲဒီအိမ်လေးမှာ မင်းအဖိုး အဘွား အဖေ့ရဲ့ မိဘတွေ ရှိနေကြဆဲပဲ။ အဖေ သေဆုံး သွားချိန်မှာ မင်းအဖိုးအဖွားတွေက အသက် ၆၀ နား ကပ်နေပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ဒီနေ့အထိ အသက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေကြလိမ့် ဦးမယ်လို့ အဖေ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဖေတို့ အမျိုးက အဖေဘက် ဗီဇ တူကြတာ များတယ်။ အဖေ့ အဖေ မင်းအဖိုးဟာ သူ့အဖေနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်။ အဖေကလည်း မင်းအဖိုးနဲ့ ရုပ်ချင်း အတှောတူတယ်။ မင်းလည်း အဖေနဲ့ ဆင်မှာပါ။ ဒါနဲ့ မင်းနှာခေါင်းမှာ မှဲ့များ ပါလာသေးလား။ ဟားဟား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ မင်းအမေဟာ ဒီမှဲ့အကြောင်းကို တခုတ်တရ အမြဲ ပြောတတ်မယ်ဆိုတာ အဖေ တွေးမိနေတယ်။ သူက အဖေကိုလည်း ဒီမှဲ့ပါလို့ အမြဲပြောတတ်တယ်။ ဒီမှဲ့ပါရင် အတှောစွံ ဆိုပဲကွ။ မင်းရော မင်းအမေ မသိဘဲ ကောင်မလေး ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရနေခဲ့ပြီလဲ။ ဪ စကားစ ပြတ်သွားတယ်။ ခုနက လိပ်စာကို ရခဲ့ရင် မင်းအဖေ့အိမ်ကို သွားပေါ့။ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို တွေ့ရင် ဒီစာလေးကို ပြပြီး အဖေသေတဿတာလေးကို တောင်းယူပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ မင်းတွေ့ချင်တာတွေ အဖေ့အကြောင်းတွေ အားလုံး တွေ့ရလိမ့်မယ်။ မင်းအတွက်တော့ အမွေ မထားခဲ့နိုင်ဘူးသားရယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ အဖေ အနှစ်သက်ဆုံး ဖောင်တိန်လေး တစ်ချောင်းရှိတယ်။ အဲဒီဖောင်တိန်လေးမှာ မင်းနာမည်ကို အဖေ ထိုးထားခဲ့တယ်။ အံ့ဩနေလား သား။ တစ်ချိန်တုန်းက မင်းကိုမွေးရင် ဘယ်လိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုတာ မင်းအမေနဲ့ အဖေ တစိတ်ထဲ တိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။ မင်းအမေဟာ အဖေ့ကို နာကျည်းပေမယ့် ဒီနာမည်လေးကိုတော့ မင်းကို အမှတ်တရ ပေးမယ်ဆိုတာ အဖေ ယုံကြည်နေမိတယ်။ တကယ်လို့များ မင်းနာမည်က ညီလင်းဆိုတာ ဖြစ်နေရင်ပေါ့။
မှတ်ချက်။ ထိုညီလင်းသည် ကျွန်တှောမဟုတ်ပါ။ o<|:)
ဒုတိယပိုင်း ဖတ်ရန် [ Link ]
Posted by NLS at 3/30/2006 01:54:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/30/2006 01:32:00 AM0comments Links to this post
မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ သကြဿငန်ရီမစ်လေး နားထောင်ပြီး လွမ်းလိုက်တာ။ ဪ သကြဿငန်မကျဖြစ်တာ ၃ နှစ် ရှိပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဒီနှစ် မဏဿဍပ် လုပ်ဖြစ်ဦးမလား မသိဘူး။ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲ။ ပျှောရာမှာ မနေရ တှောရာမှ နေကြရတယ်။ အသက်တွေလည်း တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးလာပေါ့။ တှောပါသေးတယ် မြန်မာအမ်ပီသရီး ကနေ အဲဒီသီချင်းတွေ အကုန်ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားမိလို့ အပျင်းပြေ နားထောင်ခွင့် ရနေသေးတာ။ ကုလားသကြဿငန်ကတော့ အရောင်တွေ နဲ့လိုက်သုတ်ကြတယ်။ Holi Festival လို့ခှေါကြတယ်။ ယိုးဒယား သကြဿငန်လည်း မရောက်ဖူးသေးဘူး။ တစ်နေ့ကျရင်တော့ တစ်ကမဿဘာလုံး ခရီးထွက်နိုင်ရပါစေ။ တူးစရာ ရွှေတွင်း ငွေတွင်းကလည်း မရှိ။ သူများဝန်ထမ်း အလုပ်ကိုလည်း မလုပ်ချင်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလည်း မတည်ထောင်နိုင်။ ပညာတတ် ဉာဉ်ကလေးနဲ့ မာန်ကလေးကလည်းရှိ။ ရပါလိမ့်ဦးမယ် ပိုက်ဆံ။ ကိုယ့်ကံကို ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ သိပ်မယုံလို့ ထီတောင် မထိုးဘူး။ ထိုးတာလည်း မပေါက်ဘူး။ တောကျောင်းလေးတွေမှာ ဆရာသွားလုပ်မယ်လို့ ပြောရင် အိမ်က ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး သင်ပေးထားတဲ့ ပညာတွေအတွက် နှမြောစရာ။ ဘုန်းကြီး သွားဝတ်ပြန်ရင် ဒီကောင်ပေါ့ လူ့ဘောင်မှာ အသုံးမကျလို့ ရဟန်းဘောင် ပြောင်းပြီး ဒုကဿခပေးဦးမယ် ဆိုပြီး ပြောကြဦးမယ်။ ငါကတော့ ဘယ်သူ့စကားမှ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါ့မှာ မောင်နှမတွေနဲ့ မိသားစု ရှိတယ်။ ငါ့အပှေါကောင်းကြတဲ့ ငါ့မိဘတွေ ရှိတယ်။ ငါ့အတွက်နဲ့ ငါ့မိဘတွေ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး။ ဒီတော့ အေးအေးဆေးဆေး သူတို့ဘေး နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။ လူ့ပှေါကြော့ပေါ့။ ဆိုချင်က ဆိုစေတော့။ စိုင်းဝင်းမြင့်ရဲ့ မိသားစု ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ဝမ်းနည်းမိသလိုလို။ ဪ ဘဝဘဝ။ ဇယားရှုပ်လိုက်တာနှော။
Tags : NLS , Diary
Posted by NLS at 3/29/2006 11:40:00 PM0comments Links to this post
ကိုယ့်နိုင်ငံက ကောင်းချင်ကောင်းမယ် မကောင်းချင် မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း အောက်ကျ နောက်ကျ ပြောတတ်တဲ့ မြန်မာကောင်တွေတော့ သောက်မြင်ကပ်တယ်။ မြန်မာပြည်ကို သိကဿခာကျအောင် သူတို့ အရင်လုပ်တာ။နိုင်ငံခြားသားက သူတို့ပြောမှသိတယ်။သူတို့ကို ပြောတော့ ဘာရလဲ။ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံပဲ သိကဿခာကျရတယ်။ ငါတို့နိုင်ငံက မကောင်းလို့ မင်းတို့နိုင်ငံလာအလုပ်လုပ်ရတယ်လို့ ပြောတာ ဂုဏ်ယူစရာလား။ ရင်နာစရာလား။ ငါတွေ့ဖူးပါတယ်။ နိုင်ငံမကောင်းကြောင်း ဖွာလန်နေအောင် ပြောပြီး အခွင့်အရေး ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့ ပေါင်းရပေါင်းရ လိုချင်နေတဲ့ ကောင်မျိုးတွေ။ သူတို့ကို ပါမစ်ပေးမယ် ပြောကြည့်ပါလား အားလုံးနဲ့ အလွမ်းသင့်အောင် ပေါင်းပြပါလိမ့်မယ်။ အော့နှလုံးနာတယ်။ လုပ်တယ်ဆိုလည်း ပီပီပြင်ပြင်လုပ်။ ဘာအခွင့်အရေးမှ မယူနဲ့။ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံအတွက်တော့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နိုင်ငံကိုမကောင်း ပြောတဲ့ ကောင်မျိုးတော့ ကိုယ့်လူမျိုးလို့ ပြောရမှာတောင် ရှက်တယ်။ မနေ့ကတော့ ငါမေးလိုက်တယ်။ မင်းက ဘာများ ထူးထူးခြားခြား လုပ်နိုင်နေပြီလဲ။ ပညာဘယ်လောက် တတ်ပြီလဲလို့။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ချင်ရင် ပိုက်ဆံနဲ့ ကြိုးစားမှု နဲနဲပဲ လိုတယ်။ အချိန်တန် အလုပ်ရမယ်။ ဒါမျိုးလူက ထူးချွန်သူ မဟုတ်ဘူး။ ပြောင်းလဲ စေနိုင်သူ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို တိုးတက်စေချင်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံး တှောအောင် လုပ်ရတယ်။ လူတှောမှ လူလေးစားမယ်။ လူလေးစားမှ ကိုယ်ပြောတာ သူများ လက်ခံနိုင်မယ်။ အရမ်းတှောတဲ့ သူတွေပေါင်းမှ အရမ်းအဆင့်မီတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်မယ်။ စကားတွေ ဖွာရာရ လျှောက်ပြောနေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကို တှောအောင် မလုပ်ကြဘူး။ ဒီအချိန်မှာ ရသင့်တဲ့ ပညာ ရှာသင့်တဲ့ ပညာ ရှာထားမှ နောင်တစ်ချိန် လိုအပ်လာတဲ့ အခါ မင်းက အဆင်သင့် ဖြစ်နေမယ်။ မင်းအဆင်သင့် မဖြစ်ရင် မင်းထက်တှောတဲ့လူက မင်းနေရာ ယူသွားလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ပညာပဲ။ လူတိုင်း နိုင်ငံကို ကောင်းစေချင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အလကားနေရင်း ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ်တော့ သူများဆီမှာ သွားပြီး သိကဿခာ မချကြပါနဲ့။ ကိုယ်ပဲ ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာမှာ မြန်မာများက နိုင်ငံခြားသားကို ပြောကြားခြင်းကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ မြန်မာ မြန်မာအချင်းချင်း ဆိုရင်တော့ ရင်ဖွင့်သည်ဟု ခံစားရသည်။
Tags : Idea , Diary
Posted by NLS at 3/29/2006 11:03:00 PM0comments Links to this post
Google Search Engine မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် သီချင်းရှာချင်ရင် ဒီကုဒ်ကို သုံးရပါမယ်။ သူက နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ် လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းရှိမယ့် နေရာတွေကို ပြပေးပါတယ်။
သီချင်း သီဆိုသူ နာမည်နဲ့ ရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကုဒ်ကို သုံးရပါမယ်။ နောက်က အနီပြထားတဲ့ ကုဒ်နေရာလေးမှာ ကိုယ်ရှာချင်သူကို ပြောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ mp3 မဟုတ်ဘဲ wma ဖိုင်အမျိုးအစား လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပြောင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
-inurl:htm -inurl:html intitle:"index of" mp3 "pearl jam"
တစ်ခုသိရမှာက ဒီလို ရှာတာဟာ ဆိုဒ်တစ်ခုရဲ့ Directory ကိုတိုက်ရိုက် ရောက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ ဆိုဒ်တွေက Access Denined ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှာရပါတယ်။ ကောင်းတာက တခြား အမ်ပီသရီး ဆိုဒ်တွေကလို ဗိုင်းရပ်စ်တွေ စပိုင်ဝဲယားတွေ မကပ်နိုင်တာပါ။ ရှားရှားပါးပါး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှာမရ ဖြစ်နေရင် ဒီကုဒ်လေးတွေနဲ့ စမ်းကြည့် နိုင်ပါတယ်။ သာမန် အမ်ပီသရီး ဖိုင်တွေကတော့ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ကြမှာပါ။
Tags : Technology , Music Searching Code , Google
Posted by NLS at 3/28/2006 06:03:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/28/2006 06:54:00 AM0comments Links to this post
ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျှောဆန်းက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ လခတိုးမယ် ဆိုတဲ့ ကိစဿစကို အတည်ပြု ပြောကြားသွားပါတယ်တဲ့။ ဧပြီလကနေ စတင်ပါမယ်။ ရာထူးအလိုက် ၅ဆ ကနေ ၁၂ ဆနီးပါ တိုးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အခုဆို ၁၅ဝဝဝကျပ် (US$ 12) ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့် ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့တော့ ၂ဝဝဝဝဝကျပ် (US$ 200) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းတွေလည်း တိုးပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီသတင်းကို တရားဝင် ဖြန့်ချိဖို့ မလိုဘူး ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ သိပြီးသားလို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျှောဆန်းက ပြောကြားပါတယ်တဲ့။ ဒီသတင်းနဲ့ အတူပဲ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်သွားတာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေ တက်သွားတာ ကြားရပါတယ်။ ဒီလို ဝင်ငွေ တိုးတဲ့ သတင်းဟာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ဒါပေမယ့် ဝင်ငွေတိုးပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းလည်း လိုက်တိုးမယ် ဆိုရင်တော့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ဝင်ငွေထက် ငွေကြေးတန်ဖိုး မြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ကောင်းမွန်မယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
သတင်း အကျယ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါခင်ဗျား။ [Link]
Tags: Myanmar Salaries Rise , News , Knowledge
Posted by NLS at 3/27/2006 03:39:00 PM0comments Links to this post
Orignal Picture is blur.
So I played around in Photoshop to tune up.
Nice Result!! Isnt it?
You can Grab it now.
Tags : Ei Yupar Win
Posted by NLS at 3/27/2006 08:17:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/27/2006 07:48:00 AM0comments Links to this post
Great Online Radio Station. That can help you to find your favourite song or artist and same type as well. Dont need to wait. Very fluent stream!! Its gonna be my latest favourite station.
Advantage : No more Yahoo Music , Very Lite , No Software needed
Disadvantage : Dont come out desired Artist's Songs continuously , No Rewind
Tags : Website , Song , Radio Station , Music Genome
Posted by NLS at 3/27/2006 07:02:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/27/2006 06:21:00 AM0comments Links to this post
ဦး - တည်- ထား - လိုက်-တယ်- ။
Tags : Friend , Poem
Posted by NLS at 3/27/2006 02:40:00 AM0comments Links to this post
အလွမ်းက သစ်ပင်လို ခြွေပြတယ်
စုပြုံ ရောပြွန်းနေတဲ့ နေ့ ရက်တွေက
ပတ်ဝန်းကျင် က ငါ့ကိုဖတ်တယ်
ပြဇာတ် ထဲ မှာ နစ်နေတုန်း
ဘဝက ငါ့ကို ရာဘာ ဖိနပ်လို စီးတယ်
ငါက ဘဝ ကို ဘာမှ မဆင်မြန်း ပေးနိုင်ဘူး
ဗန့်ဂိုး ............. လိုလည်း ပန်းချီမတတ်
ရှယ်လီ ............ လိုလည်း ကဗျာမတတ်
ကတ်ကိုဘိန်း ........... လိုလည်း သံစဉ်တွေ မသီတတ်
ဟဲမင်းဝေး ........ လိုလည်း ........
ငါ့ကိုယ် ငါတောင် မပီသခဲ့
ခပ်လွမ်းလွမ်းပဲ ဆိုကြပါစို့ 
သစ်ရွက်တွေက အလွမ်းရဲ့မျက်ရည်ဖြစ်ခဲ့
ငါက သစ်ပင် တစ်ပင်လို
Tags : KZY , Friend , Poem
Posted by NLS at 3/27/2006 02:35:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/27/2006 01:56:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/27/2006 01:17:00 AM0comments Links to this post
ဖျားချင်ဦးဟဲ့ ဆိုပြီး ကင်မရာယူပြီး ၃ မိုင်လောက် လမ်းလျှောက် ပစ်လိုက်တယ်။ Delhi Hat ဆိုတဲ့ အိနဿဒိယ ရိုးရာ လက်မှု ပစဿစည်းတွေ ရောင်းတဲ့ နေရာကို သွားပြီး ဓါတ်ပုံ လိုက်ရိုက်တယ်။ ၁၅ ရူပီး ပေးရတယ်။ ချွေးတွေဘာတွေ ထွက်ပြီး ကောင်းမလိုလို ဖြစ်သွားသေးတယ်။ အခုကျမှ တကိုယ်လုံး ပြန်နုံးချိပြီး ပင်ပန်းနေပြီ။ ဪ ဘဝဘဝ ဒီကိုယ်ခနဿဓာရှိလို့ ဒီလို နာရ ကျင်ရသတဲ့။ ဘုရားဟော ရှိတယ်။ ကုလားပြည်မှာ လေကောင်းလေသန့် သွားရှူစရာ နေရာက မရှိဘူး။ ဖုံတွေ သဲတွေနဲ့ သေးနံ့တွေပဲ ရှိတယ်။ နွားတွေက လမ်းပှေါမှာ ဥဒဟို။ နွားချေးဆိုတာ အထူးအဆန်းမဟုတ်။ အခုထက်ထိ နွားချေးနဲ့ မံထားတဲ့ အိမ်တွေ ရှိသေးတယ်။ စရိုက်ပဲ။ စက်မှုဘက်မှာတော့ တိုးတက်ပါရဲ့။ လူနေမှုကတော့ ဖွတ်သာသာရယ်။ ကိုယ်နဲ့ ခင်တဲ့ ကုလားတစ်ယောက်ကို ပြောမိပါတယ်။ မင်းတို့ ကုလားပြည် ဒီလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လမ်းဘေးသေးပန်းတဲ့ အလုပ်မလုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတော့ ဘာပြောတယ် ထင်လဲ။ ဆနဿဒပြပွဲတွေ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာနဲ့ ကိုင်တုပ်ပြီး နေ့တိုင်းလိုလို ဆနဿဒ ပြပွဲတွေ ရှိတယ်။ ဆိုနီယာဂနဿဒီလည်း ရာထူးက ဆင်းသွားပြီ။ ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။
Posted by NLS at 3/27/2006 12:02:00 AM0comments Links to this post
Gold prices in Myanmar soared on Sunday to 390,000 Kyats (354.54 U.S. dollars) per tical (0.0163 kg) from 340,000 kyats (309.09 dollars) as news about the government's raising sharply of the salaries of civil servants, gold dealers said.
The market exchange rate of Myanmar Kyat against U.S. dollar also rose to over 1,200 kyats per dollar from over 1,100 kyats before the move and the official exchange rate remained at nearly six kyats per dollar, merchants here said.
The market prices of gasoline also increased from 3,000 kyats ( 2.72 dollars) to 3,400 kyats (3.09 dollars), impacted by the move. The official fuel prices had been brought up once by nearly nine times starting late October last year to 1,500 kyats (1.22 dollars) from the previous 180 kyats (0.14 dollars) per gallon for petrol and 160 kyats (0.13 dollars) per gallon for diesel.
With the rising of the fuel prices, most other consumers commodities prices and transport cost are generally expected to go up correspondingly.
It was officially confirmed on Saturday evening that the Myanmar government had decided to raise the salaries of government employees toalarge margin with effect from April 1, the start of the next fiscal year 2006-07. The monthly salaries will be increased sharply byarange from nearly six times to 12.5 times for the lowest-pay-earning basic workers to government officials of ranks of managing director.
The salary of an ordinary worker was 3,500 kyats (about 3.18 dollars), while that foramanaging director stood at 16,000 kyats (14.54 dollars) before an order of the Ministry of Finance and Revenue concerning the move was issued.
Source: Xinhua [ link ]
Tags : Myanmar , News
Posted by NLS at 3/26/2006 11:54:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/25/2006 04:27:00 PM0comments Links to this post
ဝန်ထမ်းတွေ လစာ ၁၀ ဆ တိုးသွားပြီတဲ့။ ရုံးတွေကို စာဝင်ပြီတဲ့။ ဒါအမှန်ဆိုရင် ဝမ်းသာစရာပါ။ ဝန်ထမ်းတွေ အသက်ရှူ နဲနဲ ချောင်ပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီလစာတိုးတာကို လိုက်ပြီး ကုန်ဈေးနှုန်း မတိုးအောင်နဲ့ ပိုက်ဆံတန်ဖိုး မကျအောင် ထိန်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ နို့မိုဆိုရင်တော့ ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပျှောရွှင်ပါစေ မြန်မာပြည်။ မီးရေမှန်ပါစေ မြန်မာပြည်။
ဖြည့်စွက်။ အစိုးရဝန်ထမ်း ၁၀ ဆ။ အပြင်ဝန်ထမ်း ၆ ဆ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သတင်း ထပ်မံ ရရှိပါတယ်။
Posted by NLS at 3/25/2006 04:05:00 PM0comments Links to this post
ခေါင်းကိုက်ကိုက် ရှိတာနဲ့ အိပ်ယာထဲပဲ လှဲနေမိတယ်။ လူက နုံးနေတယ်။ အိပ်ချိန်တွေ လွဲနေတာ ပြသနာပဲ။ သီချင်းလေး နားထောင် ဦးမယ်ဆိုပြီး မရည်ရွယ်ဘဲ ဖွင့်လိုက်မိတာက Verve ရဲ့ Bitter Sweet Symphony ဖြစ်နေတယ်။ အိုးမိုင်ဂေါဒ့်။ ကျွန်တှော့ မျက်လုံးမှ မျက်ရည်များ ကျလာ၏။ ဘုရားစူးပါရဲ့။ ဘာမှတွေးမနေ ဆွေးမနေပါဘူး။ ဘယ်ကနေ ကျလာမှန်း မသိပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ ထိုင်ပြီး ရယ်နေမိတယ်။ အရူးထင်ကြမလား မသိဘူး။ ဒီသီချင်းကို နားထောင်မိရင် တစ်ခါတစ်လေ ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အကြိုက်ဆုံး သီချင်း တစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်တယ်။ စာသားတွေထက် သူ့ရဲ့ တယောသံက စိတ်နှလုံးကို ကိုင်လှုပ်နိုင်စွမ်း ကြီးလွန်းလှတယ်။ သီချင်းနာမည်လေးကလည်း အဓိပဿပာယ် အများကြီး ရှိတယ်။ အခု ရေးနေတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သဘောကျပြီးရယ်နေမိတဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ ကဗျာဆန်ဆန် ပြောရ ကောင်းမလား။ အင်း ဆက်နားထောင်လိုက်ဦးမယ်။ မနက်ဖြန် ဒီဘလှော့ခ်လုပ်စရေးတာ တစ်နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့။ တှောတှောတောင် ရေးဖြစ်သွားတယ်။ ဒိုင်ယာရီဆိုရင် တစ်အုပ်ကုန်ပြီပေါ့။ ကဲ ပြန်အိပ် လိုက်ဦးမယ်။
Tags: NLS , Diary , Chao
Posted by NLS at 3/25/2006 03:53:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/25/2006 03:18:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်မတို့ ခနဿဓာကိုယ်ရှိ ကြွက်သားများကို မလှုပ်ရှားစေဘဲ အသုံးမပြုဘဲ ထားမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံ စွမ်းအားတွေ တဖြည်းဖြည်း ယုတ်လျော့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအား၊ စွမ်းရည်တွေ ကျဆင်းလာ စေရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ဖျတ်လတ်ပေါ့ပါး သွက်လက်မှု တွေပါ လျော့နည်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် သွက်လက် ထက်မြက်တဲ့ လူသားတစ်ဦး ဖြစ်လာပါမယ်။ စိတ်လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းခြင်းများ ခံစားရတာ ကြိမ်ဖန် များလာတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေသော အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (Alzheimer)နဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Parkinson's_Disease)များကို ခံစားရဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများလာပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစွာ နေထိုင်ခြင်းဟာ လူ့ဘဝရဲ့ အရည်အသွေး တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက်ရှည် ကျန်းမာခြင်း နှင့်အတူ ပျှောရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝကိုပါ ရရှိလာစေ ပါတယ်။
စိတ်တင်းကြပ် ဖိစီးမှု ၊ ကျန်းမာရေး အတွက် မသင့်လျှောသော အစားအစာများ၊ ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး နဲ့ အရက်သေစာ တို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများ ခံစားရတာ ကြိမ်ဖန် များလာတဲ့အခါမှာ သွေးတိုးရောဂါကို ခံစားလာရပြီး ဦးနှောက် သွေးကြောများကို ပေါက်ပြဲ စေနိုင်ပါတယ်။ Stroke လို့ခှေါတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ပျက်စီးစေတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးကို ခံစားရပြီး ဦးနှောက် ဆဲလ်များ သေသွား စေပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါ နာတာရှည် ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဦးနှောက်တွင်းရှိ သွေးလွှတ် ကြောမကြီး ပေါက်ပြဲစေ နိုင်တဲ့အပြင် အနီးအနားက ဆဲလ်များကိုပါ ပျက်စီးစေပြီး ထိုအဂဿငါများက လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ရပ်ဆိုင်း သွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပေး သင့်သလို လူမှုပတ်ဝန်းကျင် မှာလည်း တက်ကြွ သွက်လက်စွာ နေထိုင်ခြင့်ဖြင့် ရုပ်ကျန်းမာရေးရော စိတ်ကျန်းမာရေးပါ ကောင်းမွန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်အတွက် အကောင်းဆုံးသော လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်ပြီး အသစ်အဆန်းများ စူးစမ်း လေ့လာခြင်း ဟာလည်း ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးတက် စေပါတယ်။
စစ်တုရင် ကစားခြင်းဟာ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေး တိုးတက်စေတဲ့ ကစားနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် ၂ရက်ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ များကို ပြန်လည် စဉ်းစား မှတ်မိစေခြင်း အလေ့အကျင့်ကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်မတိုရဲ့ ဦးနှောက်ကို လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပေး သင့်ပါတယ်။ Crossword Puzzle ကစားနည်းမျိုးနဲ့ ဉာဏ်စမ်း ပဟေဠိ ဖြေဆိုခြင်း များဟာလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဈေးဝယ် ထွက်တဲ့အခါမှာ ဈေးစာရင်းများကို ဂဏာန်းပေါင်းစက် အသုံးမပြုဘဲ ၊ စာရွက်ထဲမှာ ရေးချမတွက်ချက်ဘဲ စိတ်ထဲမှာတင် တွက်ချက်ခြင်း အလေ့အကျင့် ဖြင့်လည်း ကျွန်မတို့ရဲ့ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးများ တိုးတက်လာစေ နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ သင်တန်းတစ်ခုကို တက်ရောက် သင်ယူခြင်း ကလည်း စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မဟနစံ ရေးသားထားတာကို ပြန်လည် ဖှောပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags : Brain Exercise , Hanasan , Friend , Knowledge , Essay
Posted by NLS at 3/25/2006 01:16:00 AM0comments Links to this post
Country with no electricity: လျှပ်စစ်မီးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်
နိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆနဿဒကို ပြောပါဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးကို လျှပ်စစ်စွမ်းအား အပြည့်နဲ့ လင်းနေတာ မြင်ချင်မိတယ်။ မီးတွေပျက်တယ်လို့ သာမန်ပြည်သူတွေ ပြောတာကြားတိုင်း ရင်နာမိတယ်။ မီးမလာတော့ လူတွေက စောစောအိပ်ကြရတယ်။ နောက်ကျမှ ထကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ထိနမိဓ တွေ အားကြီးပြီး ဉာဏ်တွေ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းကုန်တယ်။ အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်တွေကို အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ လဲပစ်ကြရတယ်။ ဆည်တွေ အများကြီး ဆောက်ပေမယ့် ဆည်ဆိုတာ ရေရှိမှ လျှပ်စစ်ထုတ်လို့ ရမယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆည်ဆောက်တာဟာ ပတ်ဝန်းကျင် ဇီဝစနစ်နဲ့ ဂဟစနစ်ကို ပျက်စီးစေတယ်။ သဘာဝ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးမယ်။ သားရဲတိရစဿဆာန် မျိုးစိတ်တွေ ကွယ်ပျောက်ကုန်နိုင်တယ်။ ဆည်တွေကနေ လယ်ယာတွေ ရေပေးနိုင်တာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ဟာ လယ်ယာလုပ်ငန်း တစ်ခုထဲနဲ့ အသက်ဆက် ရတော့မှာလား။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီဆည်တွေကနေ မီးထွက်မထွက်တော့ မသိဘူး။ ဆည်မြောင်း၊ ဂျီအီး၊ ထောက်ပို့ ကလူတွေ ချမ်းသာ သွားလိုက်ကြတာ ကျိကျိတက်ပဲ။ ကြောက်ဖို့တောင် ကောင်းတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်က နန်းတှောကြီးတွေလိုပဲ။ သုံးတဲ့ ပစဿစည်းက အမေရိကားတို့ ဥရောပတို့က ပစဿစည်းတွေ။ သူတို့တွေ သုံးနိုင်စွဲနိုင်သွားကြတယ်။ ပြည်သူတွေကတော့ အမှောင်ထဲမှာ။ စိတ်လုံးဝ မကောင်းဘူး။
Tags: Idea, Myanmar, New
Posted by NLS at 3/23/2006 12:39:00 AM0comments Links to this post
I was mad when I saw this new - Oh! whatawonderful! I m thinking the Feudalism of Civilization IV Game. Ah har...
Myanmar's new capital in the boondocks has been elevated to "Pyinmana The Royal City," state-run media revealed on Wednesday. Myanmar's state-controlled newspapers, TV and radio stations started referring to the new capital as "Pyinmana NayPyiDaw," after the new name was first used on Tuesday evening on national TV inaweather report. The name change adds to the mysteries surrounding Myanmar's new capital, which has yet to be visited by foreign ambassadors based in Yangon, the old capital, and remains off bounds for tourists and ordinary citizens.
They announced on November7last year that it had decided to move the capital to Pyinmana,aprovincial backwater situated 300 km north of Yangon, formerly Rangoon. No formal explanation was provided for the capital shift. Most ministries have already been moved to Pyinmana NayPyiDaw, although living quarters and public utilities are reportedly very limited in the new city.
Via : Hindustantime
Posted by NLS at 3/22/2006 09:42:00 PM0comments Links to this post
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်က မြားကြီးရဲ့ ဖုံးကာမှပှေါ ဆိုတဲ့ ဟာသလေးထဲက ရယ်စရာလေး တစ်ခုကို ဖောက်သည် ချလိုက်ပါတယ်။
Posted by NLS at 3/21/2006 11:27:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/21/2006 03:23:00 AM0comments Links to this post
Tags : Harry Potter , J K Rowling , Ebook , Download
Posted by NLS at 3/21/2006 03:10:00 AM 1 comment Links to this post
Tags : Free Ebooks , Dan Brown , Download
Posted by NLS at 3/21/2006 03:03:00 AM0comments Links to this post
ထင်လင်း မြန်မာပြန်တဲ့ စည်းအပြင်ကလူ ကို တတိယအကြိမ်မြောက် ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တှော ဒီဝတဿထုလေးကို ရေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီအထဲက ဇာတ်ကောင် အားလုံးဟာ အိပ်မက်ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တှောတို့ အိပ်မက်လို့ ထင်နေတဲ့ ကမဿဘာ တစ်ခုထဲကလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ အိပ်မက် အနက်ကျမ်းတွေနဲ့ ဘာသာ ပြန်ကြည့် နိုင်ပါတယ်။ အိပ်မက် ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ခါတစ်ရံ အဆက်အစပ် ကင်းမဲ့နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံလည်း ထပ်တလဲလဲ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်မသိသူတွေ ပါလာနိုင်သလို သိသူတွေလည်း ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ နိုးသွားရင် နိုးသွားနိုင်သလို၊ အကြာကြီး အိပ်စက်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလို၊ စိတ်စွဲလမ်းမှုတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်လည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ကျွန်တှောက မင်းသား မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီစာကို ဖတ်ရတဲ့ အချိန်မှာ အဖေဟာ ဆေးရုံကြီးတစ်ခုရဲ့ အေးစက်စက် အခန်းကျဉ်းထဲမှာ လှဲလျောင်းလို့ပေါ့။ သားဟာ ဆေးကျောင်းသား တစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဂုန်နီအိတ်နဲ့ တူတဲ့ အဖေ့ရဲ့ အသားတွေကို အဖေမှန်း မသိဘဲ ဓါးနဲ့လှီးချင်လည်း လှီးနေမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အဖေ့ရဲ့ ခံစားချက် ပြင်းထန်လွန်းခဲ့တဲ့ ရင်ဘတ်နေရာက အရိုးတွေကို အံကြိတ်ပြီး လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆွဲဖြဲနေရင်လည်း ဆွဲဖြဲနေမှာပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သားကောင်မလေး စမ်းသပ် ခွဲစိတ်နေတာကို ဘေးကနေ လာကြည့်နေလည်း ကြည့်နေမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သားဟာ အဖေဆိုတာတော့ ဘယ်တော့မှ သိလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတဲ့ သိပ်တှောတဲ့ သားအမေဟာ အဖေ သေဆုံးသွားချိန်မှာ အဖေ့မျိုးဆက်သွေးကို ယူပြီး သားကို မွေးကောင်းမွေးခဲ့လိမ့်မယ်။ မွေးချင်မှလည်း မွေးလိမ့်မယ်။ မမွေးချင်လည်း မမွေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သားဟာ အဖေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့ သွေးသား အစစ်ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ အဖေယုံကြည်နေတယ်။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာတောင်မှ အဖေ့ဗီဇတွေ အများကြီးပါတဲ့ သားတစ်ယောက် ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ သားက သားအမေကို ကျွန်တှော့အဖေ ဘယ်သူလဲလို့ မေးတဲ့အခါ သူဟာ သားကို ဆူလိမ့်မယ်။ ဂစ်တာတီးတဲ့အခါ သားကိုဆူလိမ့်မယ်။ ကဗျာတွေ ရေးတဲ့အခါ သားကို ထူးဆန်းတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်လိမ့်မယ်။ ပန်းချီဆွဲတဲ့အခါ သားရဲ့ ကင်းဗတ်စ်တွေကို ဆုတ်ဖြဲပစ်လိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သားကို ရင်ခွင်မှာ အပ်ပြီး ငိုလိမ့်မယ်။ သားကို စာတွေ အတင်းကျက်ခိုင်းပြီး ဆေးကျောင်း အတင်းတက်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဖေက ဒီအချိန်မှာ သားဆရာဝန် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေမှာလို့ ပြောတာပေါ့။ အင်း အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် သားမှာ အဖေ့တုန်းကလို စိတ်ညစ်စရာတွေ လောကကြီးကို မုန်းတီးတာတွေ၊ နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးတဲ့ လူတွေ၊ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာ အံမကျတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပြသနာတွေ၊ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းသူတွေ၊ နားမလည်တတ်သူတွေနဲ့ မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ တမလွန်က အဖေက ဆုတောင်းမိပါရဲ့။
အဖေ ထပ်ပြောပြမယ်။ တကယ်တော့ သားကို သားအမေဟာ မွေးခဲ့ကောင်းမွေးခဲ့လိမ့်မယ်။ မမွေးရင်လည်း မမွေးခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဖေ့ကို သိပ်ချစ်ခဲ့ သိပ်မုန်းခဲ့သူ သားအမေဟာ တစ်ခါတုန်းက ထက်မြက်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ တွေးတတ်တဲ့ အဖေ့မျိုးဆက်ကို လိုချင်တယ်လို့ ပြောဖူးတယ်။ အဖေကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မလိုချင်ခဲ့ဘူး။ သားဟာ အဖေ့မျိုးဆက် ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်လိမ့်မယ်။ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သားဟာ မျက်မှောင်ကြုံ့ ကြည့်တတ်ရင်၊ အရာရာကို အလျော့ပေးတတ်ရင်၊ စာကျက်ရမှာ ပျင်းရင်၊ လောကကြီးနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေရင် တော့ သေချာပါတယ်။ သားအမေဟာ အဖေသေဆုံးသွားတဲ့ နောက်မှာမှ သားကို မွေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သားဟာ အဖေ့ရင်ကို ခွဲနေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သားအမေဟာ အဖေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သတ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတွက် သားဟာ လူ့လောကကြီးထဲမှာ အိပ်မက် မက်နေတာလားလို့ ခံစားနေရလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အဖေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အေးစက်စက် အခန်းထဲမှာ လှဲလျောင်းရင်း အိပ်မက်ရှည်ကြီး တစ်ခု မက်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Tags : Essay , NLS
Posted by NLS at 3/21/2006 12:50:00 AM0comments Links to this post
လပေါင်းများစွာ ထဲက လိုချင်နေမိတဲ့ ကင်မရာလေး အဖေက ဝယ်ပေးတယ်။ ငါက ငယ်ငယ်ကအတိုင်း ပိုက်ဆံ နည်းနည်း စိုက်တယ်။ ပျှောလိုက်တာ။ SLR တွေနဲ့ မရင်းနှီးသေးတော့ စမ်းသပ်နေရတယ်။ သူ့ရဲ့ ဝဘ်ဆိုက်တွေ သွားပြီး နည်းတွေ လေ့လာတယ်။ စမ်းရိုက်ကြည့်တယ်။ လက်ထဲမှာ ကိုင်ရတာကိုက အရသာ ရှိတယ်။ မန်နူရယ်လ် ရိုက်တာကို လေ့လာရဦးမယ်။ ကျှောသီဟစိုး ရှိရင် ကောင်းမယ်။ ဒီကောင်နဲ့ဆို ဒါမျိုးဘက် တွဲလုပ်ရတာ သိပ်ကောင်းတယ်။ သူက ကိုယ့်ထက်တောင် ဓါတ်ပုံဘက်ကို ခရေဇီ ဖြစ်သေးတယ်။ ပိုက်ဆံ နဲနဲ ချင်းစီ ထပ်စုပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ ကိရိယာလေးတွေ ဝယ်ဖို့ ကြိုးစားဦးမယ်။ နောက်ဆို ဒီဇိုင်း လုပ်ချင်ရင် သူများဆီက ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ စိတ်ကူး ရတာနဲ့ ကိုယ့်ကင်မရာနဲ့ ကိုယ် ရိုက်လို့ ရပြီ။ အဖေနဲ့ အမေ့ကို ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြောမိတယ်။
Posted by NLS at 3/21/2006 12:37:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/20/2006 07:49:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/20/2006 07:33:00 PM0comments Links to this post
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အကြောင်း မြန်ဖာပြည်ဖွားများ ဖိုရမ်မှာ မပရီးတီး ပရင့်ဆက် တင်ထားတာလေးကို ကူးယူ ဖှောပြလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ စားချင်ရင် စားလို့ရပါတယ်တဲ့။ အဲသည် အိတ်ခ်ျဖိုက် အန်ဝမ်း ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အပူချိန် ရဝဒီဂရီ လောက် ချက်လိုက်ရင် သေပါတယ်တဲ့။ အဲသလိုချက်ပြီးတဲ့ ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ ဟင်းတွေကို စားရင် ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဲသည် ဟင်းတွေကို ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်သူတွေမှာ ပြသနာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ကာကွယ်လို့ရလဲ ဆိုရင် ပထမဆုံး ဈေးဝယ်တဲ့ဆီမှာပါ။ ကြက်မှာ အနီ အစက်အပျောက် ကလေးတွေ ဖြစ်နေရင်၊ ကြက်ရဲ့ အမောက်က ယောင်ရမ်းနေရင်၊ လည်ပင်းဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်က ပသိတွေ ယောင်နေရင် ကြက်၊ဘဲ ရဲ့ ခြေထောက်ကြေးခွံတွေ ကြားမှ သွေးယိုစိမ့်နေရင် အဲသည်ကြက်ကို မဝယ်ရပါဘူး၊ အဲဒါ ရောဂါ ဖြစ်နေတဲ့ ကြက်လို့ဆိုပါတယ်။
အကျယ် ဖတ်လိုသူများ ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ [New Window]
Tags : Bird Flu , H5N1 , Knowledge
Posted by NLS at 3/17/2006 09:58:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/17/2006 07:55:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/17/2006 07:28:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/17/2006 05:44:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/17/2006 05:25:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/16/2006 11:05:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/16/2006 09:33:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/16/2006 09:19:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/14/2006 06:13:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/14/2006 06:04:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 3/12/2006 04:55:00 PM0comments Links to this post
တှောတှောကြာပြီ အင်တာနက်ပှေါက GoogleMovies တို့ YouTube တို့ကို ကြည့်သာ ကြည့်နေရတယ်။ ကူးချင်တာ ကူးလို့ မရခဲ့ဘူး။ အခုတော့ အိုကေသွားပြီ။ ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုက ကြားခံပြီး ကူးပေးတယ်။ ရုပ်သံဖိုင် တှောတှောများများကို ကူးလို့ရတယ်။ ဥပမာ ယူကျုက ဖိုင်တစ်ခုကို ကူးမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး အဲဒီဖိုင်ရဲ့ လိပ်စာကို ခုနက ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ သွားထည့်ပြီး ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရမယ့် ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းရမယ်။ ပြီးရင် ညာဘက်ကလစ် နှိပ်ပြီး စက်ပှေါမှာ တင်ပေးရမယ်။ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို ကျွန်တှောတို့က flv လို့ခှေါတဲ့ Flash-Movie-File အဖြစ် ပြောင်းပေးရတယ်။ အဲဒီဖိုင်ကို ဖွင့်ဖို့ကလည်း အဲဒီပလေယာ ရှိမှဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီဖိုင်ကို အမ်ပီအီးဂျီတို့ အေဗီအိုင်တို့ စတဲ့ ဖိုင်ဖှောမတ်တွေ ပြောင်းချင်ရင် ဒီကုဒ်တာ တစ်ခု ခံပြီး ပြောင်းပေးရမယ်။ နဲနဲတော့ လက်ဝင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းခံရကြိုး နပ်ပါတယ်။ အခုဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရုပ်သံဖိုင်တွေကို သိမ်းထားလို့ ရပြီ။
Download Internet Movie Files Here [Click]
Download FLV Player Here [Click]
Tags : FLV , Download , Software , Website
Posted by NLS at 3/12/2006 04:27:00 PM0comments Links to this post
ညက သတင်းတွေ ဖတ်ရင်းနဲ့ Earth ပှေါကို ဂြိုဟ်ပဲ့တွေ ကျတဲ့အကြောင်း တွေ့ရလို့ ဂူးဂယ်လ်အတ်ထ် ကနေ မြန်မာ ပြည်ကို စူးစမ်းမိတယ်။ ပထမဆုံး တွေ့တာကတော့ တွင်းတောင် ပါပဲ။ အောက်မှာ ဖှောပြထားတာက တွင်းတောင် ပတ်လည်မှာ ဒါတွေ ထိမှန်ထားတာပါ။ Bouncing ဖြစ်တဲ့ နေရာ အတန်းလိုက်ကို တွေ့ရပါတယ်။
Posted by NLS at 3/12/2006 11:38:00 AM0comments Links to this post